स्वस्थ रहन सरल उपाय !!! – E Kutumba
२०७७ चैत ११, बुधबार
हरेक मानिस जीवनमा सफलता चाहन्छ । सुखी हुन चाहन्छ । सुखमय अनि आनन्दमय जीवन होस् भन्ने चाहन्छ । मानिस सुख र सफलताको खोज गर्दागर्दै दुःखमा पुग्छ । यसको मूलकारण जीवनको मर्मलाई पूर्णरूपमा जान्न नसक्नु हो । कसैले सुखको आधार धन, परिवार र सम्पत्तिलाई मानेको हुन सक्छ । कसैले स्वस्थ्य जीवनलाई मानेको हुन सक्छ । कसैले विद्या तथा सम्मान पाउनुलाई सफलता मान्दछन् । निरोगी शरीर, बुद्धिमान र आज्ञाकारी सन्तान, व्यवस्थित आवास आदि सफलताको आधार त बन्छ । तर सबै कुरा राम्रो भए पनि शरीर रोगी भइदियो भने सफलताको कुनै अर्थ हुँदैन । जीवनमा स्वास्थ्य चिन्तनको ज्यादै महत्वव छ । शरीर रक्षा र आरोग्यता प्राप्तिका लागि अनेक योगको अभ्यास र औषधिको विधि विधानलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आयुर्वेदले अनेक कामहरू छोडेर भए पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्ने कार्यमा लाग्नुपर्छ भन्छ । शरीर ठीक छ भने नै सबै कुरा हुन्छ ।
शरीर कमजोर भयो भने सम्पूर्ण वस्तुको कुनै अर्थ रहन्न । शरीरबाट नै जीवनयापनको सुरुआत हुन्छ । शरीरको माध्यमबाट धर्मको साधना गर्न सकिन्छ । अनिमात्र सफलता र असफलता भन्ने कुरा आउँछ । जीवनमा सफलता र समृद्धि चाहने व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनै पर्दछ । स्वास्थ्य भन्नाले सामान्य बुझाइमा निरोगी हुनुलाई लिइन्छ । तर स्वास्थ्यको व्यापक अर्थ छ । योग दर्शनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ, मानसिक रूपमा सन्तुलन, बौद्धिक रूपमा प्रतिभावान् तथा आत्मिक रूपमा सबल र सामाजिक रूपमा सहयोगी हुनुलाई स्वास्थ्यको वास्तविक अर्थ मानिन्छ । रोगी र दुर्बल मानिसले महत्ववपूर्ण कार्य गर्न सक्दैन । सफल जीवनका लागि स्वस्थ जीवनको महत्वव छ ।
स्वस्थ रहन अपनाउनुहोस यि सरल उपाए
हरपल सकारात्मक सोच गर्ने, नकारात्मक विचार आइहालेमा १ मिनेट मौन रहने, सकेसम्म हाँस्ने र अरुलाई पनि हँसाउने ।
बिहान र दिनको खाना टन्न खाने बेलुकाको भोजन कम गर्ने किनकि दिनमा खाएको खाना परिश्रममा खर्च हुन्छ । शरीरको लागि बेलुकाको खानाले मोटाउँछ र आलस्य पनि बनाउँछ ।
खानापछि दाँत ब्रस गर्ने, बिहान बेलुका आफ्ना उमेरअनुसार प्रशस्त निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्ने । सबै रोगको मूल कारण कब्जियत भएकोले यो रोगबाट जसरी पनि बच्न आवश्यक छ । प्रत्येक दिन २०-९० मिनेटसम्म व्यायाम गर्ने, समय अनुकूल भएमा २०-६० मिनेट बिहानको घाम ताप्ने, हप्तामा एकपल्ट मनोरञ्जन गर्ने, बिवाहित भए हप्तामा १–२ पटक संभोग गर्ने, प्रत्येक १ जना नयाँ साथी बनाउने गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी प्रत्येक महिना साथीभाइसित भेटघाट गर्ने, प्रत्येक ३ महिनामा नयाँ ठाउँको यात्रा गर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा संख प्रक्षालन गरी शरीरको भित्रीभाग पुरै सफा गर्दा शरीर स्वस्थ रहन सक्छ । त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २ हप्ता बिदा मिलाई भ्रमणमा जाने र प्रत्येक १० वर्षमा घर डेरा वा स्थान फेर्ने । यसरी जिन्दगीमा फेर्न मिल्ने जति फेरिरहने र प्रत्येक सय वर्षमा चोला फेर्ने कि कसो? हाँसौं दिल खोलेर, हा.हा.हा.हा.हा.हा.हा……।